Akụkọ - Influenza ka ọ bụ COVID-19? Ihe nchọpụta PCR multiplex anyị nwere ike inyere gị aka ịmata ọdịiche
Ọhụụ ụlọ ọrụ
Nsọpụrụ na iru eru
Ndị mmeghachi omume
Influenza ma ọ bụ COVID-19? Ihe nchọpụta PCR multiplex anyị nwere ike inyere gị aka ịmata ọdịiche
Mgbaàmà nke COVID-19 na influenza yiri nke ahụ, ya mere achọrọ njirimara ziri ezi
Kemgbe Disemba 2019, coronavirus ọhụrụ (2019-nCoV / SARA-CoV-2) na-agbasa n'ụwa. Nchọpụta ziri ezi na nyocha nke ndị butere ọrịa ma ọ bụ ndị na-ebu ya bụ ihe dị oke mkpa na mkpa maka njikwa ọrịa. Na mgbakwunye, oge ugbu a bụ ọnụọgụ dị elu nke ọtụtụ influenza A virus 、 influenza B nje na nje virus ndị ọzọ metụtara. Ngosipụta ahụike nke ọrịa coronavirus ọhụrụ na ihe ịrịba ama izizi nke ọrịa nje influenza yiri nke ahụ. "Atụmatụ Mgbakọ na Mgbakọ Ọrịa Influenza nke China (2020 Edition)" gosipụtara n'ụzọ doro anya na nyocha na nyocha nke ọma, ma kwalite nkwonkwo nkwonkwo nke ọtụtụ pathogens nke ọrịa na-efe efe, na-akwado nchọpụta n'otu oge nke ọtụtụ pathogens ọkachasị ihe nyocha dị iche nke ọhụrụ coronavirus na influenza A / B nje. .
Ihe nchọpụta nchọpụta COVID-19 + Flu A / B PCR nke CHK Biotech bidoro
Naa, akwa anya e ugwo ka echetakwa nke ndị ọzọ nkịtị akụkụ okuku ume na pathogens ma e wezụga n'ihi ọhụrụ coronavirus. Otú ọ dị, ihe mgbaàmà nke influenza A / B kpatara yiri nke mgbaàmà ahụike nke coronavirus ọhụrụ. N'ime usoro nkwenye ndị ọrịa nwere oyi baa na coronavirus ọhụrụ ma ọ bụ ndị a na-enyo enyo na ọ bụ ndị ọrịa, ọ dị mkpa iji nyochaa ohere nke ọrịa ndị ọzọ (ọkachasị influenza A na influenza B) iji mepụta nhazi ahụike, iche yana ọgwụgwọ n'oge, nke bụ nnukwu nsogbu ga-edozi na eziokwu. Ya mere, CHK Biotech mepụtara ihe nchọpụta COVID-19 / AB multiplex iji dozie nsogbu a. Ngwunye ahụ nakweere usoro PCR dị adị n'ezie iji chọpụta nje atọ ahụ iji nyochaa na ọdịiche dị n'etiti ndị ọrịa COVID-19 na ndị ọrịa influenza, ọ nwere ike rụọ ọrụ dị mma na mgbochi na njikwa nke COVID-19.
Uru nke ngwaahịa a: oke uche; imekotaotuugbo nchọpụta 4 lekwasịrị anya, ekpuchi ọhụrụ coronavirus, influenza A, influenza B, na esịtidem akara site n'usoro dị ka àgwà akara ke ofụri usoro nke nnwale, nke nwere ike n'ụzọ dị irè izere ụgha na-adịghị mma na ya pụta; nchọpụta ngwa ngwa na nke ziri ezi: Ọ na-ewe naanị 1 awa na 30 nkeji site na nchịkọta nchịkọta iji rụpụta.
Amplification usoro nke ọhụrụ coronavirus/influenza A / B nyochara ngwakọta atọ
Ọrịa ọhụrụ coronavirus ka nọ n'ọkwa dị mkpa maka mgbochi na njikwa. N'ịbụ ndị nwere mmetụta na-agbanwe agbanwe, Usoro mgbochi na njikwa anyị, ụzọ nchọpụta, na ụzọ nyocha na-aga n'ihu na-ebute ihe dị elu.CHK Biotech bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe ọmụmụ ma nwee obi ike mgbe niile iburu ibu ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị anọwo na-emeri nsogbu nke teknụzụ ma na-aga n'ihu na-azụlite ngwaahịa ọhụrụ metụtara nchọpụta nke nje virus ọhụrụ coronavirus.
Anyị ghọtara na ọ bụ naanị iji obi ike ịmalite ime ka anyị ga-aga n’ihu itolite; naanị na-aga n'ihu ọhụrụ anyị nwere ike imeri ọdịnihu. N'oge ọ bụla, CHK Biotech na-eji "amamihe" na "ihe ọhụụ" eme ihe iji kpochapụ ngwaahịa ya ma jeere Life sciences, ubi nyocha.
Post oge: Mar-12-2021
Shanghai Chuangkun Bio gbadosiri ike iweta teknụzụ nyocha ihe omimi nke ọhụrụ iji rite ahụike nke mmadụ niile yana iji hụ na nchekwa nri na ịba ọha mmadụ uru.
Adress: Room 802, Iwuli 1, No.69 Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai, PR.China
Ekwentị: + 86-21-60296318
CHKBiotech mepụtara ihe nyocha ...
Influenza ma ọ bụ COVID-19? Multiple PCR anyị ...
Lyophilized ọhụrụ okpueze nucleic acid reagen ...